युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की रुसको अगाडि झुक्न लागेका हुन् ? किन दिए यस्तो बयान ? भिडियो सहित — Imandarmedia.com
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की रुसको अगाडि झुक्न लागेका हुन् ? किन दिए यस्तो बयान ? भिडियो सहित
काठमाडौं। आफ्नो देशमा रुसले २ हप्तादेखि गरिरहेको आक्रमणको अगाडि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले घुँटा टेकेका छैनन् तर अब उनले संकेत दिएका छन् कि उनी ‘सम्झौता’को लागि तयार छन्।
लगातार कुटनैतिक वार्तामा जोड दिइरहेका जेलेन्स्कीले दोनेत्स्क, लुहान्स्क र नेटोमा युक्रेन सहभागी हुने विषयमा खुलेर कुरा गरेका छन्। उनले अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल एबीसीलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा आफूले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन जोडबल नलगाएको बताएका छन्।
नेटो नै त्यो ठूलो मुद्दा हो जसलाई लिएर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकै असहज छन् र भनिन्छ रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुको ठूलो कारण यही हो। पुटिन चाहँदैनन् कि नेटोले उनको कुनै छिमेकी देशसम्म पहुँच बनाउन सकोस्।
यसका साथै जेलेन्स्कीले युक्रेनका २ रुस समर्थित क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कको विषयमा पनि आफ्नो कुरा राखेका छन्। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन अर्थात उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४९ मा बनेको थियो।
नेटो के हो ? यो संगठन बनाउने अमेरिका, क्यानडा र अन्य पश्चिमी देश थिए। यो संगठन उनीहरुले तत्कालीन सोभियत युनियनबाट सुरक्षाको लागि बनाएका थिए। त्यतिबेला विश्व २ घ्रुवीय थियो। एक महाशक्ति अमेरिका थियो र अर्को महाशक्ति सोभियत युनियन । सुरुमा नेटोका सदस्य देश १२ वटा थिए र अहिले यी सदस्यको संख्या बढेर ३० पुगेको छ।
नेटो स्थापनापछि यो संगठनले घोषणा गरेको थियो कि उत्तरी अमेरिका वा युरोपका कुनै पनि नेटो सदस्य देशहरुमाथि आक्रमण भएमा यसलाई संगठनमाथिको आक्रमण मानिनेछ र नेटोका सदस्य हरेक देशले अर्का देशलाई सहयोग गर्नेछन्।
तर, डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत युनियनको पतनपछि कैयौं कुराहरु बदलिए। नेटो जुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यसको एउटा ठूलो कारण सोभियत युनियन विघटन भइसकेको थियो । विश्व एक ध्रुवीय भइसकेको थियो। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचेको थियो । सोभियत युनियन विघटनपछि रुस बन्यो जो आर्थिक रुपले निकै कमजोर भइसकेको थियो ।
रुस एक महाशक्तिको रुपमा रहेर भत्किएको पीडा र आक्रोशबाट आफूलाई सम्हालिरहेको थियो। भनिन्छ, त्यतिबेला अमेरिकाले चाहेको भए रुसलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्थ्यो तर अमेरिका शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट मुक्त भएन र रुसलाई पनि युएसएसआर अर्थात सोभियत युनियनकै रुपमा हेरिरह्यो ।
नेटोको विस्तारलाई लिएर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन असन्तुष्ट छन् । मध्य र पूर्वी युरोपमा रोमानिया, बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, लातभिया, इस्टोनिया र लिथुआनिया समेत २००४ मा नेटोमा सहभागी भएका थिए । क्रोएसिया र अल्बानिया २००९ मा नेटोमा सहभागी भए । जर्जिया र युक्रेनले पनि २००८ मा सदस्यता पाउनेवाला थिए तर दुवै अहिलेसम्म बाहिरै छन्।
नेटोबारे जेलेन्स्कीले के भने ?एबीसीको अन्तरवार्तामा जेलेन्स्कीसँग युक्रेन नेटोमा सहभागी नहुने रुसको मागबारे उनी के भन्छन् भनेर सोधियो । जवाफमा जेलेन्स्कीले भने ‘म वार्ताको लागि तयार छु । जब हामीले बुझ्यौं कि नेटो हामीलाई स्वीकार गर्नको लागि तयार छैन, त्यसपछि मैले धेरै पहिले नै यो मुद्दालाई पछाडि छोडिसकेको थिएँ।
जेलेन्स्कीले नेटो विवादित कुराहरु र रुससँग टकरावका विषयमा पहिलेदेखि नै डराउँदै आएको बताएका छन्। नेटोको सदस्यता पाउने विषयमा जेलेन्स्कीले आफू कुनै यस्तो देशको राष्ट्रपनि बन्न नचाहेको बताए जसको देशले घुँडा टेकेर कुनै कुराको भिख मागिरहेको होस्।
युक्रेनमा २४ फेब्रुअरीमा आक्रमण गर्नुभन्दा एक दिन पहिले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रुस समर्थिक पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका २ क्षेत्र लुहान्स्क र दोनेत्स्कलाई स्वतन्त्र देश घोषित गरेका थिए।
युक्रेनमा युद्ध रोक्नको लागि रुसले राखेका मागहरु नेटोमा सहभागी नहुने, क्रिमियालाई रुसी क्षेत्र मान्ने र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र देश मान्ने विषयमा जेलेन्स्कीले आफू वार्ताको लागि पूर्ण रुपमा खुला रहेको बताए।
जेलेन्स्कीले भने ‘म सुरक्षा ग्यारेन्टीको कुरा गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ अस्थायी रुपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई रुसबाहेक अरु कसैले पनि मान्यता दिएका छैनन् र यी दोनेत्स्क र लुहान्स्क छद्म राष्ट्र हुन्। तर, यो विषयमा हामी कुरा गर्न सक्छौं र यस विषयमा सम्झौता गर्न सक्छौं कि यी क्षेत्र अगाडि कसरी चल्न सक्छन्।
मेरो लागि यो जरुरी छ कि यी षेत्रमा रहेका मानिसहरु कसरी बाँच्नेछन् र युक्रेनको हिस्सा बन्न चाहन्छन् वा चाहँदैनन्। जो युक्रेनमा छन् उनीहरु चाहनेछन्। त्यसैले यो प्रश्न उनीहरुलाई मान्यता दिनुभन्दा कठिन छ। जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ‘इन्फर्मेसन बबल’बाट बाहिर निस्किएर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने ‘यो फेरि अन्तिम चेतावनी हो र हामी अन्तिम चेतावनीहरुका लागि तयार छैनौं । राष्ट्रपति पुटिनले अब छलफल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिना अक्सिजन इन्फर्मेसन बबलमा बस्नुको सट्टा उनले छलफल सुरु गरुन्। उनी त्यो बबलमा बसिरहेका छन् जहाँ उनले वास्तविकताको जानकारी पाइरहेका छैनन।
अन्तरवार्ताको क्रममा जेलेन्स्कीसँग देश छोड्ने मौका पाउँदा किन नगएको भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा उनले भने ‘म आफ्नो राष्ट्रको नागरिक हुँ र वैध तरिकाले निर्वाचित राष्ट्रपति हुँ। उनले यस्तो अवस्थामा आफूले युक्रेन छोडे आफू जीवित त रहन सक्ने तर कहिल्यै एक मानवको रुपमा नरहने बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुसी तेल र ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको जेलेन्स्कीले स्वागत गरेका छन्। उनले ट्वीट गरेर बाइडेनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।रुसको माग के छ ?
रुस सरकारका प्रवक्ताले सोमबार भनेका थिए कि यदि आफूहरुको शर्त मानियो भने युक्रेनविरुद्ध कुनै ढिलाइ नगरी तत्काल सैन्य अभियान रोक्न रुस तयार भएको बताएका थिए।
प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका थिए युक्रेनले आफ्नो सैन्य कारवाही बन्द गरोस्, आफ्नो संविधानमा संशोधन गरेर तटस्थता स्थापित गरोस्, क्रिमियालाई रुसी क्षेत्रको रुपमा मान्यता देओस् र पृथकतावादी षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मान्यता देओस्।
युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसको यो अत्यन्तै स्पष्ट बयान हो। पेस्कोभले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै युक्रेनलाई यी शर्तहरुको बारेमा थाहा भएको बताउँदै भनेका थिए उनीहरुलाई भनिसकिएको छ कि सबथोक एकैछिनमा रोक्न सकिन्छ।
पेस्कोभले रुसले युक्रेनको कुनै जकिनमा दावी नगरेको बताउँदै कुनै क्षेत्र कब्जा गर्न पनि नचाहेको स्पष्ट पारे। उनले राजधानी किभ ‘रुसलाई सुम्पिने’ माग सत्य नभएको बताए ।पेस्कोभले भने ‘हामी वास्तवमा युक्रेनको सैन्यीकरणलाई समाप्त गरिरहेका छौं।
हामी यसलाई समाप्त पार्नेछौं। तर, मुख्य कुरा यो हो कि युक्रेनले आफ्नो सैन्य कारवाही रोकोस्। उनीहरुले आफ्नो सैन्य कारवाही रोक्नुपर्छ र त्यसपछि कसैले पनि गोली चलाउने छैन।
संविधानमा संशोधन र तटस्थ रहने विषयमा रुसले भनेको छ कि युक्रेनले आफ्नो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ ताकि ऊ कुनै पनि गठबन्धनलाई आफ्नो देशमा घुस्नबाट रोक्न सकोस्।